Pagelines: WordPress ကိုဆွဲယူ။ ချပါ | Martech Zone
Pagelines - WordPress Theme ကိုဆွဲချချပါ
ကြာသပတေးနေ့, မေလ 12, 2011 တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 19, 2014 Douglas Karr
ဖြစ်ချင်တော့၊ ငါဒီနေ့မနက်မှာအေဂျင်စီတစ်ခုနှင့်စကားပြောနေရတာ၊ ငါတို့ကဲ့သို့ PHP developer များဖြစ်ကြသော PHP developer များအနေဖြင့် WordPress API ကိုအပြည့်အဝနားလည်ပြီး temn များနှင့် plugins များစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းသည်အချို့သောကုမ္ပဏီများနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လက်လှမ်းမမီနိုင်ပါ။ အဓိကအချက် - သင်၏ layout (သို့) အခင်းအကျင်းကိုသင်ပြုပြင်လိုသည့်အခါတိုင်း developer ကိုဖုန်းခေါ်ရခြင်းသည်စျေးကြီးနိုင်သည်။
PageLine ဟာသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်နဲ့ပြောင်းလဲနေတယ်။ ပလက်ဖောင်း။ Platform ၏ရှေ့ဆုံးဒီဇိုင်းသည်အသစ်သောအယူအဆကိုအခြေခံသည် ကဏ္ဍများ။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်ကဏ္sectionsများသည် WordPress ဝစ်ဂျက်များ (drag-and-drop sidebar content) နှင့်ဆင်တူသည်။ သူတို့သည်အလွန်ကြီးသောဒီဇိုင်းများဖန်တီးရန်နှင့်တင်းပလိတ်များနှင့်အသုံးပြုရန်အတွက်များစွာပိုကောင်းသည်။ ကဏ္sectionsများသည်အဘယ်ကြောင့်အံ့အားသင့်စရာအကြောင်းများအချို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Plug-and-Sections အပိုင်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသော (ဥပမာ - ဆလိုက်ဒါးစ်၊ အညွှန်း၊ ဝိုင်းဝိုင်းစသည်တို့) ကြိုတင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောဝက်ဘ်ဒီဇိုင်းအပိုင်းအစများဖြစ်သည်။ ကုဒ်အားလုံးသည်အပိုင်း API မှထိန်းချုပ်။ စီမံသည်။ ဒါကြောင့်သင်မြင်တွေ့ခဲ့သမျှအားလုံးသည်ရိုးရိုး drag and drop interface နှင့်ရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည်။
ထိန်းချုပ်မှုကဏ္ionsများကိုစာမျက်နှာတစ်ခုချင်းစီအနေဖြင့်ဖွင့်ပိတ်ပိတ်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်ကိုယ်ပိုင်စာမူအမျိုးအစားများနှင့်ရွေးချယ်စရာများကိုထည့်နိုင်သည်။ သင်၏ဆိုဒ်ရှိစာမျက်နှာတိုင်းကိုစုစုပေါင်းထိန်းချုပ်မှုကိုဆိုလိုသည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို Base ကလေးဆောင်ပုဒ်တွင်ဒီဇိုင်နာများက ဖန်တီး၍ ပြုပြင်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဒီဇိုင်နာများသည် drag & drop ကဏ္secondsများကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ရိုးရှင်းသောကဏ္Sများတွင်စံသတ်မှတ်ထားသော html markup နှင့်စိတ်ကြိုက်ချိတ်ဆက်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်တစ်ချိန်တည်းမှာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းပိုပေးနေချိန်မှာဒီဟာက code အများကြီးကိုလျှော့ချပေးတယ်။
Layout Builder ပါ - Drag & Drop ကဏ္ sections အသစ်များ၏ထိပ်တွင် Platform တွင်သင့် site ၏အရွယ်အစားကိုပြုပြင်ရန် draggable layout builder လည်းရှိသည်။ site အကျယ်အသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်မတူညီသော sidebar အပြင်အဆင် (၅) ခုစီကို configure လုပ်နိုင်သည်။ ထို့နောက်စာမျက်နှာတစ်ခုချင်းစီအလိုက် layout ကိုရွေးချယ်ပါ။
bbPress နှင့် BuddyPress - Platform သည် BuddyPress နှင့်ပေါင်းစည်းမှုများကိုလည်းအထောက်အပံ့ပေးပြီးကိုက်ညီသော bbPress forum theme (developer edition) လည်းရှိသည်။ ပေါင်းစည်းမှုသည်ချောမွေ့ပြီး Platform အသုံးပြုသူများကိုအမှန်တကယ်ကျွမ်းကျင်ပြီးတက်ကြွသောတည်ရှိမှုကိုပေးသည်။
Full-Width နှင့် Fixed-Width Modes - PageLine သည်မတူညီသောဒီဇိုင်းပုံစံများကိုမှတ်သားထားသည်။ သင်၏ဆိုဒ်ကိုပလက်ဖောင်းဖြင့်တည်ဆောက်ရန်နည်းနှစ်နည်းရှိသည်။ Full-width mode သည်သင့်အား full-width content element များ (နောက်ခံပုံများကဲ့သို့) ရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။ fixed-width mode သည်သင့်အား fixed-width content နှင့်နောက်ခံ element များအားပေးသည်။
ကလေးသူငယ်အဓိကအကြောင်းအရာ - Platform ကိုအလွယ်တကူစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်နှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရာတွင်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များဖြင့်ကူညီရန်အခြေခံကလေးအခင်းအကျင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ စိတ်ကြိုက် CSS ဒီဇိုင်းအချို့ကိုလွှင့်ရန်၎င်းကို HTML သို့မဟုတ် PHP ကဲ့သို့သောကုဒ်များကိုဆောင်ပုဒ်တစ်ခုအတွင်းရှိနေရာများတွင်ထည့်ရန်၎င်းကိုသုံးပါ။ ၎င်းတို့သည်သင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်အပိုင်းများကိုထည့်ရန်အလွယ်တကူတည်ဆောက်ထားသည်။
စျေးနှုန်း - လိုင်စင်တစ်ခုတည်းအတွက်ကုန်ကျငွေသည် ၉၅ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ ဘက်စုံသုံးတည်ဆောက်သူလိုင်စင်ကိုဒေါ်လာ ၁၇၅ ဖြင့်ရောင်းချမည်။ ၎င်းတွင် bbPress ဖိုရမ်၊ ဂရပ်ဖစ်နှင့်ချိတ်ဆက်မှုများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
Tags: ဒေတာအစုအီးမေးလ်တုံ့ပြန်သူပထဝီပစ်မှတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗွီဒီယိုများမိုဘိုင်း Multi- ရုပ်သံလိုင်း
EyeTrackShop: Web Cam မှတဆင့်မျက်လုံးခြေရာခံခြင်း
Kyle Stewart က
မေလ 12, 2011 မှာ 8: 29 pm တွင်
ပလက်ဖောင်းသည် WordPress တွင်တိုးတက်ရန်အလွန်ကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လွယ်ကူစွာလုပ်နိုင်တဲ့အပြင်တကယ်ကြီးမားတဲ့ချောင်းကိုလှုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေပါ ၀ င်ပါတယ်။
မေလ 13, 2011 မှာ 12: 59 AM
ဂရိတ်ပြန်လည်သုံးသပ် Doug! netuts + blog ကိုဖတ်နေတုန်းငါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က PaltformPro ကိုဖြတ်ပြီးဒီဆောင်ပုဒ်ကတကယ်ကိုကောင်းပါသလားလို့တွေးမိတယ်။ ဒါဟာမှန်ကန်တယ်လို့ထင်ရပေမယ့်သူလုပ်နိုင်တာကိုကြည့်ရတာစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဆိုဒ်များဒီဇိုင်းရေးဆွဲပုံကိုအလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအချိန်များစွာသက်သာစေသည်။
မေလ 15, 2011 မှာ 4: 40 AM
ဆောင်းပါးကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Doug၊ ငါလုပ်နေတဲ့ buddypress site တစ်ခုအတွက်ဒီဟာကိုဝယ်လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ရေခြားမြေခြားဒီဇိုင်းကောင်လေးယခုတွင်အလုပ်လုပ်နေပြီ။ ငါတကယ်ပြုသောအမှုခံရဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်
7:2012 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 3, 27
7:2012 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 3, 34
မင်္ဂလာပါပါလာ - သင်ဟာဘုရားများနှင့်စကားပြောခြင်းသို့မဟုတ်ပုံမှန် WordPress အခင်းအကျင်းတစ်ခုတည်းကိုဆိုလိုခြင်းလား။ WordPress အခင်းအကျင်းတစ်ခုဖြင့်အခြား menu နှင့် footer ကြေငြာချက်ကိုထည့်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော်သင့်အခင်းအကျင်းတွင်တည်းဖြတ်မှုပြုလုပ်နိုင်မည့်သူနှင့်သင် WordPress ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုသိရှိနိုင်မည့်သူကိုသင်ရှာရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်ထိုသို့ပြုလုပ်သောရှေးရှေးတစ်တန်ရှိပါသည်။ ငါဂူဂဲလ်မှာရှိတဲ့ 'wordpress designer' ကိုရှာပြီးမင်းရှာတွေ့တာကိုတွေ့လိုက်တယ်။
7:2012 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 5, 33
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ စာမျက်နှာရှိအပိုဆောင်းမီနူးတစ်ခုကိုထည့်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်
အဆိုပါအောက်ခြေအပေါ် link ကို? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ wordpress နဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့အရမ်းခက်တယ်
7:2012 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 5, 35
7:2012 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 5, 58
သငျသညျကျိန်းသေသင်အင်ဖိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်ရှိရာအောက်ခြေထဲမှာ html areaရိယာထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ငါအလယ်တန်းမီနူးအကြောင်းကိုသေချာမသိဘူး။ ဒါကအလုပ်တချို့လိုတယ်။